New Haulm-egbu igwe Site Denmark - Potatoes News
Igwe ogbugbu ohuru si Denmark
Danishlọ ọrụ Danish MSR Plant Technology na-ere igwe na-egbu nduku nke na-ebibi okporo osisi nduku na ala wee kpuchie ha na ala. A na-ejikwa onye na-ebu igwe na-arụ ọrụ maka igbo ahịhịa na ịghaghachi azụ.
Igwe ahụ na-etinye poteto n'elu ma ọ bụ n'etiti riiji ahụ chọrọ. N'ihi na nduku iche ndị susceptible ka fungal infestation na blackleg ọ na-atụ aro ka ebe nwa ehi n'etiti ridges. Ọ bụrụ na etinye akwụkwọ osisi ahụ na riiji, ohere ihicha ya pere mpe.
Igwe nduku Danish
Ikpuchi isi ala gbajiri agbaji na ala na-egbochi oria ero na ihicha, yana regrowth. A na-ebibi ntọala ahụ site na teknụzụ hydraulic nke patented, dabere na mgbatị abụọ dị iche iche na-agba ọsọ dị iche iche. Igwe nkenke na-agbanwe agbanwe nke igwe na-egbochi tubers nduku ka ọ na-arịgo n'elu ala n'ihi ọrụ ahụ. Ihe ndị ahụ na-adịgide na-adịgide adịgide site na teknụzụ ziri ezi.
Ọ na-ewe ihe dịka ọkara elekere kwa elekere iji gbanwee igwe site na 'Opti Weeder n'ime' Crusher Crown '. Nhọrọ dịgasị iche iche nke onye na-ebu ngwá ọrụ na-enye na-eme ka igwe ahụ dị iche, dị ka onye mmepụta Michael Stolberg-Rohr si kwuo. Ọnwụnwa ndị e mere na 2020 egosila na nchikota nke ala nke ridges tupu obere akwụkwọ nduku emechi n'etiti ridges na igbu ihe na Crown Crusher na-abawanye mmetụta nke igbu egbugbu ahụ. Otu ọrụ ya na Crown Crusher zuru ezu n'ụzọ a. Drivinggba ọsọ ọsọ na ahịhịa na-egbu nwere ike ịbụ kilomita 8-12 kwa elekere. Dabere na onye nrụpụta ahụ, ikike ahụ karịrị nke ndị ọzọ na-egbu egbu na-abụghị kemịkal. Thegba ọsọ na-agba ọsọ mgbe ị na-eji igwe na ahihia na ahịhịa ala bụ kilomita 15-20 kwa awa.
arụpụta igwe ogbugbu nke na-ebibi okporo osisi na nduku wee kpuchie ha na ala.
Asatọ na ahịrị
A na-enye atụmatụ nhọrọ nke na-ebuli osisi ị ga-ebugharị tupu ibibi ntọala. A na-emepụta Opti Weeder na nhazi nke abụọ, nke anọ, nke isii na nke asatọ, ebe Crown Crusher dị na igwe na-usoro abụọ na anọ. A na-arụ ọrụ na igwe nwere ike ijikwa ahịrị asatọ. Afọ a onye nrụpụta Michael Stolberg –Rohr 25-30- na-atụ anya inwe ike ịre igwe. Enweela igwe ahụ onyinye ngosi atọ nke ụlọ ọrụ ngosi ngosi Danish Agromek.
Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ
Tags: igwe oru ugboakuku ndukuburu ihe ubi
Ọchịchọ iwepu ụzọ mbata maka ridges
Ugo Eye Produce na ebuputa akpa kombo ohuru maka Idaho poteto
Mgbapu mmịpụ mmemme SDGP mmemme nduku Uganda